Ingakanani imzuzu yevidiyo ye-4K ethatha ii-iPhones ezintsha? | Iindaba zeGajethi
Ingakanani imzuzu yevidiyo ye-4K ethatha ii-iPhones ezintsha?
UIgnacio Sala | | Iiselfowuni, Ikhamera
Andazi ukuba zeziphi izizathu ezikhokelele abafana baseCupertino Qhubeka nokubonelela ngemodeli exabisa phantse i-euro ezingama-800 njengemodeli esisiseko ene-16 GB kuphela, xa izixhobo ezininzi zexabiso le-Android zibonelela okungenani i-32GB yokugcina. Ityala le-Apple linobuzaza ngakumbi xa ucinga ukuba izixhobo azikuvumeli ukwandisa indawo eyongezelelweyo kuyo, ke ukuba siphelelwa yindawo kwisixhobo sethu isisombululo ekuphela kwaso kukususa usetyenziso, iividiyo, umculo okanye nantoni na ngelo xesha. ukuthatha indawo eninzi kunesiqhelo.
Iimodeli ezintsha ze-iPhone, njengoko zininzi ezinye izixhobo ezinokuthi zenze, zinokurekhoda kumgangatho we-4K. Ubungakanani beevidiyo ezirekhodwe kulo mgangatho bukhulu kakhulu, eya kusinyanzela ukuba ngaphambili singabinanto kweso sixhobo ukuba sifuna ukurekhoda ngokuqhubekayo isiganeko esikhethekileyo esinokusithatha ixesha elide kunesiqhelo.
Ngokungafaniyo nolwazi esinokulufumana kuseto lwevidiyo kwi-iOS 8 kwiimodeli ezindala ze-iPhone 6 kunye ne-iPhone 6 Plus, apho indawo iividiyo ezirekhodwe kwi-60 fps ezinokuhlala kuyo ayiboniswa (umgangatho ophezulu kunokwenzeka), nge-iOS 9 entsha Iimodeli ze-iPhone eziziswe izolo, ukuba thina bonisa isikhokelo esincinci apho indawo iboniswa indawo ekuhlalwa kuyo ngumzuzu ngamnye orekhodiweyo kumgangatho owahlukileyo okhoyo.
Yonke imizuzu yokurekhoda Umgangatho we-4K uhlala / unobunzima be-375 MB.
Yonke imizuzu yokurekhoda Umgangatho we-1080p we-HD kwii-60 fps uhlala / unobunzima obungama-200 MB.
Yonke imizuzu yokurekhoda Umgangatho we-1080 HD kwi-30 fps uhlala / unobunzima be-130 MB.
Yonke imizuzu yokurekhoda Umgangatho we-720p we-HD kwii-30 fps uhlala / unobunzima obungama-60 MB.
Ngale datha ibonelelwe yi-iOs 9, nge-16 GB elusizi enikezelwa yeyona modeli isisiseko ye-iPhone Sinokurekhoda kuphela imizuzu engama-35 kumgangatho we-4K, ucinga ukuba sinesixhobo esicoceke ngokupheleleyo, sine-iOS 9 efakwe kunye nazo zonke iinkqubo zemveli, esisishiya simahla simahla malunga ne-14 GB.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Ingakanani imzuzu yevidiyo ye-4K ethatha ii-iPhones ezintsha?
Isizathu silula: ukuba abantu bathenga i-64gb ewe okanye ewe, oko kukuthi, bazi kakuhle ukuba i-16gb ayonelanga ngokwazi ukuba ngalo lonke ixesha yonke into ithatha indawo engaphezulu (ii -apps ezinzima, 4k, njl.). Ngokunyanisekileyo idilesi entsha kaMnu. Ukupheka kubonakala ngathi akulunganga kum, umzekelo, i-iPhone epinki, leliphi icandelo elijolise kulo? Ngaba iya kuba yeyabasebenzisi abaninzi? Okanye ekugqibeleni ziya kuthengiswa njenge-iphone c? Kungangcono ngakumbi ibhetri kunye nebluetooth esebenzayo njengoko kufanelekile. Ungayichazanga iwotshi ye-Apple ebiza kakhulu kuba iyintoni, okanye ukuzama ukuvuswa kwe-iPod.
I-Crot Loot ekugqibeleni ifika eSpain
I-Apple TV yesizukulwane se-4 vs Apple TV isizukulwana sesi-3